အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: 02/01/2014 - 03/01/2014
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကချင်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးမိန့်ခွန်းဟောခဲ့ရာ လမောင်ရွာကလေးဆီသို့အမှတ်တရ ခရီး
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, February 12, 2014 Wednesday, February 12, 2014 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့နဲ့ မနက်ဖန် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ရက် ဗိုလ်ချုပ် မွေးနေ့အတွက် မှတ်မှတ်ရရ ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ် ရေးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။ ဒီတစ်ခေါက် ကျွန်မရဲ့ ဇာတိမွေးရပ်မြေကို ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါ မပြန်ခင်ကတည်းက ရောက်အောင်သွားမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားခဲ့တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကို သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ နေရာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကျွန်မတို့ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသကို ရောက်လာခဲ့စဉ် ကချင်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နေရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ဖားကန့်ဒေမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတာ ဖြစ်ပေမဲ့လို့ အဲဒီနေရာလေးကို ဒီအရွယ်အထိ တစ်ခါမှကို မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ ဝေးလှတယ် မဟုတ်ပေမဲ့ သွားလာရေး ခက်ခဲတာရယ်ကြောင့် မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
၁၉၄၆ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ကချင်ပြည်နယ် ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသဖြစ်တဲ့ လမောင် ရွာကလေးမှာ ကချင်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ လွတ်လပ်ရေး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ (လမောင်ရွာကို လှမောင်လို့ အသံထွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်နာမည်တွေမှာ ဟထိုးမပါပေမဲ့ ဟထိုးအသံထွက်နဲ့ ထွက်ပါတယ်။ ဥပမာ လဆိုင်း ဆိုတဲ့ ကချင်ယောက်ျားလေး နာမည်ကို လှဆိုင်းလို့ အသံထွက်ပါတယ်။) အဲဒီနေရာလေးကို ကျွန်မနဲ့အတူ စာဖတ်သူတို့ကိုလည်း အတူခေါ်သွားပါရစေ.. လမောင်ရွာကို သွားတဲ့လမ်းဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ၊ ဗိုလ်ချုပ် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ နေရာကလေးဟာ ဘယ်လိုအမှတ်တရများ ရှိနေမလဲ ဆိုတာလေးတွေ လိုက်ပါကြည့်ရှုရအောင်ပါနော်။
လမောင်ရွာကို သွားတဲ့ လမ်းတွေပါ။ ယခင်ခေတ်ကတော့ သာမာန်လူသွားလမ်းကလေးဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ ခုချိန်မှာတော့ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်တွေ များစွာ ရှိလာတာကြောင့် ဘူဒိုဇာတို့၊ ဘက်ဖိုးတို့နဲ့ လမ်းတွေကို ကျယ်ဝန်းလာအောင် လုပ်ထားပါပြီ။
သွားရတဲ့ လမ်းကတော့ တကယ့်ကို တောင်တက် တောင်ဆင်းတွေများတဲ့ လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းဘေးဝဲယာ ချောက်ကြီးတွေ၊ ကမ်းပါးကြီးတွေကို ဖြတ်သွားရပါတယ်။
ကျောက်စိမ်းတူးလက်စ လုပ်ကွက်များစွာကိုလည်း ဖြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်နားထားချိန်ဖြစ်လို့ အချို့နေရာတွေမှာ အပိုင်းပိုင်း ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ တောင်တွေ၊ အချို့နေရာတွေမှာတော့ တောင်တွေဖြို၊ မြေတွေတူးထားတဲ့ လုပ်ကွက်တွေရဲ့ နေရာတွေဟာ ရေကန်ကြီးတွေဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဖားကန့်ဒေသမှာ သဘာဝကြောင့် မဟုတ်ပဲ လူတွေကြောင့် ယခုပုံထဲကလို ကြီးမားလှတဲ့ ရေကန်ကြီးတွေ ရေအိုင်ကြီးတွေဟာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲအောင် ရာနဲ့ချီပြီး ရှိနေပါပြီ။ ယခင်က ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ တောင်တန်းတွေ တောင်ကုန်းတွေ သစ်ပင်တောတောင်တွေ နေရာမှာ ကျွန်မတို့ ဒေသခံတွေ ရရှိလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ အခြားသော ဓာတ်ပုံတွေ များစွာကိုတော့ နောက်မှ သီးသန့်ရေးမှာမို့ အရှည်မပြောတော့ပဲ ချန်ခဲ့ပါမယ်။
အဲဒီလို တစ်တောင်တက် တစ်တောင်ဆင်းနေရင်းကနေ ရွာတစ်ရွာကို ရောက်သွားပြီး အဲဒီတစ်ဝိုက်က အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်တစ်ခုကို ဆက်တက်ခဲ့ရာ ဆုတောင်းတောင်ထိပ်ကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ လမ်းမှားပြီး လမောင်ရွာကို မရောက်ပဲ အခြားတောင်ပေါ်တစ်ခုကို ရောက်သွားတာပါ။ ဒီနေရာက မော်မောင်းဘွမ်ဆိုတဲ့ မော်မောင်းတောင်ထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘွမ်ဆိုတာ ကချင်လို တောင်ကို ခေါ်တာပါ။ ဇီအုန်ဆုတောင်းတောင်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ တောင်ထိပ်မှာ ကချင်လူမျိုးတို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဇီအုန်ဆုတောင်းကုန်းရှိပါတယ်။ ကြီးမားလှတဲ့ လက်ဝါးကပ်တ်ိုင်ကြီးကိုလည်း ခန့်ခန့်ညားညား တွေ့ရပါတယ်။ သာသနာ့နယ်မြေဖြစ်လို့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေပြီး အေးချမ်းလှပါတယ်။ အဲဒီတောင်ထိပ်ကို လမ်းမှားရင်း ရောက်သွားတာလည်း ကျေးဇူးတင်စရာပါ။ တောင်ပေါ်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းဒေသရဲ့ တောင်စဉ်တောင်တန်း အထပ်ထပ်ကို နှင်းမြူတွေကြားက လွမ်းမောစဖွယ် ရှုမြင်ရပါတော့တယ်။
ပန်းချီကားတွေထဲက အလှမျိုးလိုပါပဲ.. အထပ်ထပ် ဖြစ်နေတဲ့တောင်တွေကိုမြင်မှ ကိုယ့်ရဲ့ ဒေသဟာ ဒီလောက် လှပ လွမ်းမောစရာကောင်းမှန်း သိရပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်တွေ တော်တော် များများကတော့ ကျောက်စိမ်းရှာဖွေသူတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ဖြတ်တောက်ချိုးဖဲ့ထားခြင်း ခံရတာပါပဲ။ နောင်ကိုတော့ ဒီတောင်တွေ မြင်မှမြင်ရပါတော့မလား၊ အကောင်းအတိုင်း ကျန်ပါတော့မလား ဆိုတာ ဘယ်သူက သေချာပြောနိုင်မှာလဲနော်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေသာ များများရိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီတောင်ပေါ်ကနေ မျှော်ကြည့်လိုက်တော့မှ ကျွန်မတို့ သွားလိုတဲ့ လမောင်ရွာကို ပျပျလေး လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ အဲဒီတောင်ထိပ်မှာတော့ ရွှေရောင်စေတီလေးတစ်ဆူ ရှိပါတယ်။ အဲဒီရွာကို သွားတဲ့ တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကိုလည်း ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ မပါတော့ပါဘူး။
နောက်ထပ် မိနစ်အတော်ကြာ တောင်တွေ တစ်တောင်ပြီးတစ်တောင် ဖြတ်ပြီးတော့ လမောင်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ တောင်ထိပ်က ရွာကလေးဆီ ရောက်ပါတော့တယ်။ ဒါကတော့ ရွာအဝင်လမ်းကလေးပါ။ ရွာထဲ ဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲ ရွာထိပ်မှာ ကျောက်တိုင်လေးတစ်တိုင် လှမ်းတွေ့ရပါတော့တယ်။ အဲဒီနေရာဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တဲ့နေရာကလေးပါ။
ကျောက်တိုင်ပေါ်က စာအတိုင်း ရေးရမယ်ဆိုရင် "၁၉၄၆ခုနှစ် လမောင်ရွာ ဤနေရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ကချင်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးနှင့် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်" လို့ ရေးထိုးထားပါတယ်။
ကျောက်စာရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ပါ။ စာတွေကတော့ စောစောက ဖက်နဲ့အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်တိုင်ရှေ့နားမှာ အပင်တစ်ပင်ကို တွေ့ရမှာပါ။ ကြည့်ရတာတော့ ဇီးဖြူပင်နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာပါ။ အဲဒီအပင်ကို ဒီနေရာလေးအတွက် အမှတ်တရရ သက်သက်များ စိုက်ထားခဲ့လေသလားတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဒီနေရာလေးကို မှတ်မှတ်ရရ ဒီကျောက်တိုင်လေးတစ်တိုင် စိုက်ထူဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တဲ့ သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ကျောက်တိုင်အောက်ခြေနားမှာ ရေးထိုးထားတဲ့ အလှူရှင်ကိုလည်း ဖော်ပြချင်ပါသေးတယ်။
ခလရ (၇၄) စစ်ကြောင်း (၂)မှ ဗိုလ်မှူးသောင်းမြင့် လှူဒါန်းသည်။ လို့ တွေ့ရပါတယ်။
ဆရာ ဦးသန်းထွန်းနှင်း ကိုတူး ဆောက်လုပ်သည်လို့ ရေးထိုးထားပါတယ်။ သူတို့ ကတော့ ကျောက်တိုင်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖားကန့်ခရီးစဉ်ကို ရောက်လာတုန်းကလည်း ဒီနေရာကို သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လမောင်ရွာကလေးထဲက အိမ်တစ်ချို့ပါ။ ကားပေါ်ကနေ ရိုက်တာမို့ ပုံတွေက သိပ်တော့ မကောင်းလှပါဘူး။ လမောင်ရွာဟာ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ အများစု နေထိုင်တဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ခြေလည်း သိပ်မများလှပါဘူး။ ရွာသူရွာသားတွေဟာ ရိုးသားပြီး ရောင့်ရဲတင်းတိမ် တတ်ကြပုံ ရပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော် ၇၀နီးပါး ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ ရွာကလေးရဲ့ အနေအထားဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရောက်လာခဲ့စဉ်ကနဲ့ သိပ်ပြီးတော့ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲမှုရှိဟန် မတူပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်သာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် နှစ်တွေ ဒီလောက်ကြာတာတောင် ပြောင်းလဲမှု သိပ်မရှိတဲ့ အနေအထားကို အံ့များသြလေမလား၊ ဝမ်းနည်းပက်လက်များ ဖြစ်နေလေမလားလို့ တွေးမိပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ ဒီ လမောင် ရွာလေး အပါအဝင် ကျမတို့ ကချင်ဒေသ တစ်ခုလုံးဟာ သဘာဝတရားရဲ့ လက်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ သစ်တောတွေ၊ တောင်တန်းတွေ၊ မြစ်ချောင်းတွေနဲ့ ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက် တွင်းထွက်ရတနာတွေ စတဲ့ မြေပေါ်၊ မြေအောက်သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ အလွန်အင်မတန်ပေါကြွယ်ဝတဲ့ ဒေသတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီလို သဘာတွေ အရင်းအမြစ်တွေ ကိုယ့်ဒေသမှာ ရှိပါလျက်နဲ့ အဲဒီဒေသမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာကြတဲ့ ဒေသခံလူတွေအတွက် ဒီနေ့ ဒီအချိန်အထိ ထိရောက်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် မရရှိတဲ့အပြင် ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဖူးဘဲ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေလို ဒီဒေသကို ရောက်ချလာတဲ့ ဝိသမ စီးပွားရေး သမားတွေနဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာ အာဏာပိုင် တချို့ကြောင့် သူတို့ ပြန်ရလိုက်တာက ကောသွားတဲ့ မြစ်တွေ ချောင်းတွေ၊ မြေစာပုံအောက်ရောက်သွားတဲ့ စားကျက်တွေ၊ စိုက်ခင်းတွေနဲ့ ပြိုပျောက်သွားတဲ့ သစ်တောတွေ၊ တောင်တန်းကြီးတွေ သာ ဖြစ်လို့နေတာကတော့ မိအေး နှစ်ခါနာသာမက မိအေးအခါခါနာရတဲ့ အဖြစ်ဆိုက်နေပါလား လို့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ တွေးမိပြန်ပါတယ်။ သြော်.. တကယ်တော့လည်း ဒီလို အဖြစ်မျိုးဟာ ကျွန်မတို့ ဒေသ တစ်ခုတည်းတင် မဟုတ် ကျွန်မ သွားခဲ့လာခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျားက ဒေသတွေ၊ တွေ့ကြုံ ဆုံခဲ့ ရသူတွေ ပြောပြတဲ့ အဖြစ်တွေမှာလည်း ဒီလို ဆင်တူတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ အများကြီး ဆိုတာ ဆက်တွေးမိပြန်တော့ ငါတို့ ချည်းပဲ မဟုတ်ပါသေးဘူး လို့ပဲ တွေးရမလား၊ ကိုယ့်ဒေသက အဖြစ်အပျက်တွေက နဲနဲတော်ပါသေးတယ်လို့ ပဲ ဖြေသိမ့်ရမလား၊ ကိုယ့်ရေတွင်းထဲက ရေကို ကိုယ်သောက်ခွင့် မရတဲ့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကို ကျွန်မတို့ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်စွမ်း မရှိကြတော့ဘူးလား.. စတဲ့ လားပေါင်းများစွာ၊ မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဝေခွဲမရဖြစ်လို့သာ လာပါတော့တယ်။
ကျောက်တိုင်နဲ့ ရွာထဲ တဝိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဓာတ်ပုံတွေစိတ်ကြိုက် ရိုက်ပြီးတာနဲ့ တောင်ကုန်းထိပ်က စေတီလေးဆီ သွားခဲ့ကြပါတယ်။
သာသနပါလ စေတီတော်လို့ အမည်ရပါတယ်။ အခြားသော သိမ်ကျောင်းနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုပါ တောင်ထိပ်နားမှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ လမောင်ရွာကလေးပါ။
ဒီရွာကလေးမှာ ယခင်ကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ စေတီပုထိုးတွေ မရှိပါဘူး. ခရစ်ယာန်အများစု နေထိုင်တဲ့ ရွာကလေးပါ။ ခုနောက်ပိုင်းမှ ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ချို့နဲ့ ရွာထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ စုပေါင်းပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက် ဘုရားတည် လုပ်ကြတာ မကြာသေးပါဘူး။ ခုချိန်မှာတော့ လမောင်ရွာကလေးမှာ ခရစ်ယာန်ရော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပါ အေးအေးချမ်းချမ်း အတူတကွ နေထိုင်နေကြပါတယ်။
တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ ရှုခင်းတွေပါ။
ဒီနေရာကတော့ စစ်တပ်ရှိရာ တောင်ကုန်းကလေးပါ။
အပြန်လမ်းမှာ မှော်တစ်ချို့ကနေဖြတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ မှော်ထဲက အိမ်တစ်ချို့ကတော့ အသည်းယားစရာ ။ တောင်စောင်းတွေမှာ ခုလို အနေအထားနဲ့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မိုးရာသီလို မြေကြီးတွေပြိုတတ်တဲ့အချိန်မျိုး အတွက်တော့ အလွန်အန္တရာယ် များလှပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း အိမ်ဆောက်ထားတဲ့နေရာတွေက မြေမာ မဟုတ်ပဲ ကျောက်တူးပြီး မြေကြီးတွေ ပုံထားတဲ့ နေရာမျိုးတွေပါ။ အသားမကျသေးတဲ့ မြေတွေက ရေများများထိရင် ပြိုကျတတ်တာမျိုးပါ။
တောင်အထပ်ထပ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် စဉ်းစားနေမိတာက ဗိုလ်ချုပ်တို့ ရောက်လာခဲ့စဉ်တုန်းက ဒီနေရာတွေဟာ ကားလမ်းလုံးဝ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး. ဒီနေရာထိ ရောက်အောင် ခြေလျှင်လျှောက်ပြီး လာခဲ့ရမယ် ဆိုတာ ဗေဒင်မေးစရာ မလိုပါ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် မျှော်လင့်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက် ဘာတစ်ခုမှ မပါဘဲနဲ့ ခုလို တောင်တက် တောင်ဆင်း များလှတဲ့ ခရီးကြမ်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဖြတ်သန်းပြီး ကချင်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် မိန့်ခွန်း လာရောက်ဟောကြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တိုးလို့သာ ကြည်ညို လေးစားမိပါတော့တယ်။ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်းမှာ အေးအတူ ပူအမျှ နေထိုင်လာကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးလည်း စည်းစည်းလုံးလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လေးလေးစားစား ရင်းရင်းနှီးနှီး အမြဲတမ်းသာ ရှိသွားကြမယ်ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့၊ ရည်မှန်းခဲ့တဲ့ အေးချမ်းသာယာသော ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်နေမှာ၊ ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူးလို့ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ အလေးအနက် ဆန္ဒပြုရင်း ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတော့တယ်ရှင်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကချင်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးမိန့်ခ...